News – Fursad Fund
Fursad Fund Annual Report (2016)
Total operational funds received as sponsor is $37,645.00
Total donated amount for operations expenses was US $37,645.00
Total amount spend on creating opportunities is $35,912.00
Download full report here (PDF; 107kb)
Posted on February 27, 2017 June 14, 2017
Fursad Fund is One Year Old
Today is the first anniversary of Fursad Fund, the Somali-owned Somali-led initiative. We have implemented a number of projects in the last 12 months, creating hundreds of opportunities for the Somali communities.
Click on the infographic to few the high quality version.
Posted on October 2, 2016 June 14, 2017
Waxaan kuugu hambalyeyneynaa farxada maalmaha ciidul-Adxaa, waxaan rajeyneynaa in ciidaan teeda kale uu alle nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo baraare.
Taarikhda marka aay ku beegneyd 20/08/2016 waxaa xafiiska Fursad Fund ka dhacay kulanka golaha sare ee sanduuqa Fursad Fund iyagoo ka dooday isla markaana ansixiyay mashaariicda la fulin doono taas oo hawlwadeenada aay soo hordhigeen. Golaha sare waxa aay ansixiyeen in la fuliyo illaa sadex mashaariic oo aan rajeyneyno in aan hergelino sida ugu dhaqsiyaha badan. Mashaariicda la hergelin doono waxa aay kala yihiin:
Kaamilo: Sida ku cad qorshaha maalgelinta mashaariicda ee Fursad Fund ee ah in 40% oo kamid ah guud ahaan lacagta uu sanduuqa soo aruuriyo fursado loogu abuuro haweenka soomaaliyeed. Mashruucan waxaan ugu talo galnay haweenka ka ganacsada Khudaarta iyo hilibka xoolaha gaar ahaan hilib ariga ee Muqdisho ku nool. In ka badan 2,900 oo haween ah ayaa ka ganacsada suuqyada khudaarta iyo hilibka lagu iibiyo haweenkaas intooda badan waxaa ku xariira caruur iyagoo kafaala qaada qoysas badan. Maadaama sanduuqa Fursad Fund hadda uusan awoodin in uu daboolo guud ahaan baahida haweenkaas, haddana aan dooneyno in aan kor u soo qaadno ganacsikooda, waxaan ka soo xulanay 20 qofood ee ugu nugul. Waxaan u kala qaadnay 10 hablo oo khudaarta loo maalgelin doono iyo 10 hablo oo hilib ariga loo maalgelin doono: 10 Haween ah oo Hilib ariga ka ganacsada waxa aan siin doonaa lacag aay ku iibsadaan 10 neef oo Ari ah, lacagtaas oo aay ku soo celin doonaan Muddo sanad ah. Sidoo kale haweenka ka ganacsada khudaarta waxaan ka maalgelin doonaa 10 haween ah oo aan qofkiiba siin doono $300. Guud ahaan mashruucan waxaa shaqo si toos uga heli doona 20 qofood halka 20 qofood oo kalena aay shaqo uga heli doonaan si dadban taas oo tirada guud ee dadka shaqada helaya ka dhigeysa 40 haween ah waxaana ku bixi doonta $10,000.00 (Toban kun doolar).
Waa mashruuc aan dooneyno in aan joogto ka dhigno isla markaana aan uga faaideyno Haween badan si aan ganacsikooda kor ugu soo qaadno.
Mashruuca maalgelinta beeraha ee Beydhabo: Sida aay go’aamiyeen golaha sare ee sanduuqa Fursad Fund 20% lacagta uu sanduuqa soo aruuriyo wax loogu qabto Naafada soomaaliyeed. Waxaan booqasho ku tagnay magaalada Beydhabo halkaas oo aan kula soo kulanay koox iskaashashato naafo ah oo ka kooban 26 qofood oo naafo ganacsato ah, waxeey iibsadeen beer baaxadeedu tahay 7 Hector, waxa aay Sanduuqa Fursad Fund ka soo codsadeen in beertaas loo maalgeliyo si aay dalag ugu beertaan. Xubnahaan 26 qof ka kooban ee iskaashatada naafada ah waxa aay gacanta ku hayaan 520 qofood oo naafo ah. Lacagta faaidada ah ee beertaan kasoo xaroota waxa aay qorsheeynayaan in aau fursado shaqo ugu abuuraan dadka naafada ah ee ku nool magaalada Beydhabo. Mashruucaan waxaa ku bixi doonta $10,000.00.
Aquaponics Greenhouse: Waa mashruuc dhanka beeraha ah gaar ahaan dhisida xarun casri ah (Greenhouse) oo lagu beeri doono miro iyo wax soo saar kala duwan oo dhanka khudaarta ah. Somaliland Food Solutions waa hay’ad aay ku mideeysanyihiin beeraleey leh xirfad beerasho oo casri ah kuwaas oo isku xilsaaray in aay xaliyaan dhibaatooyinka heysta beeraha iyo beerashada intaba. Waxaan heshiis la galnay hay’adan Somaliland Food Solutions heshiiskaas oo ah in xirfadahan hormarinta beeraha lagu balaariyo guud ahaan dhulalka aay Soomaalidu dagto (ee Geeska Afrika).. Mashruucaan waxaa shaqo ka heli doona 19 qofood: 12 qofood oo ka shaqeyn doonta bilaawga dhismaha xarunta iyo 7 qofood oo si joogta ah ugu hawgeli doonta. Guud ahaan mashruucan waxaa ku bixi doonta $11,000.00.
Waxaan hadda aruurinay lacag gaareysa $41,939.17 (Afartan iyo kow kun sagaal boqol sodon iyo sagaal dhibic toban iyo todobo). Mashaariicdan waxaan ugu talo galnay in aan ku qarash gareyno $31,000.00 (sodon iyo koow kun) waxaana shaqooyin ka heli doona 102 qofood (62 qofood oo si toos ah shaqo ugu heli doona iyo 40 qof oo sii dadban uga shaqeyn doonta.
Waxaan kugu dhiiragelineynaa in aad talo soo jeedin ka sameyso mashaariicdan aan kuu soo dirnay maadaama aad kamid tahay dadka soomaaliyeed ee qaatay go’aanka ah in aay dib u soo nooleeyaan isku tashigii dadka soomaaliyeed isla markaana aay fursado shaqo u abuuraan walaalahood.
Hadaad dooneyso xog intaan ka badan kala soco websitekaan ama Facebook, iyo Twitter
Fursad Fund Team
Fursad Fund waxeey bogaadinaysaa dhamaan shirkadaha ka qeyb qaatay in aan fursado u abuurno umadda Soomaaliyeed.
Posted on August 29, 2016 May 26, 2017
Fursad Fund Director: “We have raised US $41,000”
Agaasimaha Fursad Fund: “Waxa aan ururinnay $ 41,000 — dadku waxaa ay soo codsan karaan maal gelin ganacsi”
29th August: Muqdisho-Mustaqbal Radio–Fursad fun waa sanduuq maaliyadeed oo loogu talagalay in lagu aruuriyo lacago ay bixiyaan qeyb ahaan bulshada si fursado ganacsi, waxbarasho ,iyo shaqo abuur loogu sameeyo inta aanan heysan maalgalinta balse u diyaarsan in ay dhaqdhaqaaq ganacsi sameeyaan ama ay shaqeystaan.
Qorshaha fursad fun waxa uu yahay in 5,000 oo qof ay bixiyaan $ 1 maalin kasta taasi oo sanadkii noqoneysa 1.8 Milyan oo dollar , waxaana loogu talagay in lagu abuuro 5,000 oo fursadood sanadka ugu horeeyo balse 200 oo ka mid ah deeq bixiyaasha soomaaliyeed ayaa bixiyay lacago waxa ayna gaartay $ 41,000
habka loo bixinayo fursadaha shaqooyinka iyo ganacsiga loogu abuurayo qeyb ahaan bulshada 40 % waxaa la siinayaa haweenka , 40 % waxaa la sii nayaa dhalinyarada halka 20 % la siin doono dadka qaba baahida gaarka ah ama uusan lixaadkoodu dhameystirneyn.
Agaasimaha Barnaamijka Fursad Fun Deeq Maxamed, ayaa sheegaya sida ay u qaabilayaan dadka rabo in fursadaha shaqo loo sameeyo iyo kuwa rabo in loo maal geliyo aragtida ay heystaan waxaa la kulantay, Nasriin Maxamed Ibraahim oo ka tirsan Radio Mustaqbal ugu horeyn waxa uu sharaxayaa waxa uu yahay fursad fun iyo halka ay wax marinayaan.
Wareysiga halkaan ka dhageyso.
Posted on June 2, 2016 June 14, 2017
Waxaan dhammaan deeq-bixiyeyaasheena ugu hambalyeynaynaa xuska maalinta shaqaalaha adduunka oo maanta oo Axad ah ku beegan. Waxaan sidoo kale bogaadineynaa inaad kamid noqoteen 5ta kun ee bartilmaameedka noo ah sanadkan koowaad.
Muddadii labada bilood ahayd ee aan hawshan wadnay waxaa deeqbixiyeyaal noo noqday dad tiradoodu gaareyso 119 ruux oo lacago kasoo diray ilaa 12 dal sida idiinka muuqata shaxda hoose. Dadkaasi waxaa qofka ugu badan uu bixiyay $400 halka kan ugu yar uu bixiyay 0.95 Sinti. Runtii waa horumar ballaaran in dad intaas la eg ku dhiirradaan in ay Fursad Fund taageeraan.
Lacagaha shaxdan ku jira waxaa lagu shubay 3 Bank oo dalka ka shaqeeya oo kala ah Premier Bank ($8,316), Salaama Bank ($18054) iyo IBS ($185). Lacagahaas waxaa ka saari kara xisaabta ku jirta Bank-yadan Guddiga Maamulka Sare ee Fursad Fund kaliya oo ka kooban 10 ruux.
Warbixinta Guddiga maamulka oo faahfaahsan, halkaan ayaad ka heli kartaa.
Sanduuqa Fursad Fund wuxuu idiin ballan qaadayaa hufnaan iyo isla xisaabtan dhab ah, bil walbana waxaan idiin soo diri doonnaa farriimo ka turjumaya hawsha aan wadno.
Ugu Dambeyntii, maxay kula tahay deeqbixiye inaan saxno maadaama aad hawsha dusha kala socoto? Ma jiraa afkaaro aad nagu soo biirineyso? Guddiga Sare ayaa shiraya bishan dhexdeeda si ay go’aamo uga gaaraan mashaariicda ugu horreysa ee sanduuqu fulinayo.
Fadlan nala soo wadaaga aragtiyadiina, soojeedintiinna iyo talooyinkiina hagar la’aaneed. Taasi waxay sii hagaajinaysaa daahfurnaanta Fursad Fund